EGWUREGWU ỌTỤTỤ EGWUREGWU 2018: TOP 10 NA NKỌWA NA FOTO - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
N'agbanyeghị otú ọgụgụ isi dị aghụghọ na aghụghọ nwere ike ịbụ, ọ na-adọrọ mmasị mgbe niile ịlụ ọgụ na ezigbo ndị mmadụ. A na-eme ka egwuregwu ụfọdụ nke oge a dị mma maka usoro ntanetị, ebe ndị ọzọ na-akwado ọtụtụ mmadụ, nke mere ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ ga-aga, otu egwuregwu ga-eme. N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga, e nweela ọrụ ndị na-akpali akpali, ndị kachasị dị egwu na-ada n'elu iri nke egwuregwu multiplayer nke 2018.
Ndị ọrụ ụlọ 2
NBA 2K Gburu egwu 2
Total War Saga: ocheeze Britannia
Bio Inc. Mgbapụta
Ọrụ nke ndị ọrụ Crew 2 bụ mgbalị siri ike ịmepụta agbụrụ MMO n'ụwa. Ọtụtụ Fans nke ụdị ahụ masịrị egwuregwu ahụ, n'ihi na ịnọdụ na ọnọdụ dị iche iche, nke yiri ezigbo America, na egwuregwu ndị ọzọ na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali. Ị nweere onwe gị ịhazi agbụrụ, dozie ụzọ na ịlụ ọgụ maka ebe dị elu na Fim! Ihe ngosi mara mma na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụgbọala dị iche iche nke klas dị iche iche - nnukwu arụmụka maka ọrụ ahụ.
Iji kpochapụ ihe ọkpụkpọ ọkpụkpọ pụtara ịkpọ ya aka na-agba ọsọ duel.
Japanese ọgụ egwuregwu Soulcalibur nwere a na-egbuke egbuke akụkọ ihe mere eme nke mmepe. Ihe oru ngo a bu otu onye nnupu isi na ndi mmadu, ndi na-achotaghi egwuregwu ndi mmadu na-acho ma obu gosiputa ogugu ya na umuaka. Nke isii, nke Geralt n'onwe ya lere anya na Rivia, ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu egwuregwu na-amasị ya. Nnukwu agha dị iche iche na-egbuke egbuke ka na-ahụ n'anya! Ọnọdụ nke jupụtara na egwuregwu ndị jupụtara na egwuregwu ndị na-asọpụrụ ọrụ nke onye ọ bụla ma nwee onye na-adọrọ mmasị site na pirouettes na-egbu egbu na ihuenyo.
Mmegbu nke Witcher na-achọ Asia Katana Masters
N'oge opupu ihe ubi nke afọ a, ihe nkiri nke egwuregwu a ma ama Overwatch - Paladins pụtara na Steam. Egwuregwu na ndị na-arụ ọrụ egwuregwu na-agafe na MOV-shooter na free fans of hit from Blizzard. Ndị na-ese onyinyo, ọtụtụ ụzọ dị iche iche na-adọrọ adọrọ, agha dị ike na ọtụtụ ihe odide nwere ikike pụrụ iche - ihe niile a bụ Paladins, nke ghọworo otu n'ime egwuregwu kacha mma n'Ịntanet n'afọ a.
Paladins ọbụna na-azụ ihe dị ukwuu site na Overwatch, ma ọ na-eme ka ọ bụrụ nke na-enweghị atụ na ịhụnanya maka ihe ngosi ya
Nzuzo oge ugbua emeela ka echefu ya ... O yiri ka taa mmadu ole na ole nwere mmasi n'udi a. Otú ọ dị, ọrụ Northgard ghọrọ ihe nnọchianya na-akpali nnọọ mmasị na onye nwere obi ike nke ụdị, onye nwere ike ịmepụta ọ bụghị naanị ihe dị iche iche nke usoro nhazi oge niile, kama ọ na-ejikwa usoro ọrụ nke Ọchịchị nke a hụrụ n'anya nke ukwuu. Ụdị Scandinav na ọtụtụ ebe e zoro aka na ọdịbendị nke Vikings mere egwuregwu ahụ n'ụzọ dị egwu na mbara igwe. Northgard bụ atụmatụ kachasị mma nke afọ a na ọnọdụ dị iche iche nke ọtụtụ mmadụ.
Onye ọkpụkpọ ahụ ga-eduga otu n'ime ndị agbụrụ ahụ a chọrọ, nke ọ bụla n'ime ha kwadoro otu ụdị mmeri
Akụkụ mbụ nke Insurgency na-etinye onwe ya dịka onye na-agba ụta nke ọma maka ndị na-enweghị mmasị na ọnụ ọgụgụ nke Arma na usoro ọrụ otu Counter Strike. Ngalaba ohuru nke Sandstorm na-anọgide na-agbaso ụkpụrụ nke mbụ: n'ihu anyị bụ onye na-agba egwu nke hardcore, nke iwu ahụ "bụ onye mbụ hụrụ onye iro, ọ meriri" ọrụ ọtụtụ mgbe. Uzo otutu di iche iche na oru a bu ihe ndi nchikota banal, ma ha bu ndi na-adi adi na ndi oru ndu nke Insurgency na-enye.
Enwere ike ịchọta ihe omimi nke insurgensy na ihe niile, site na ígwè ọrụ, na-ejedebe na ụda gbaa
Otutu Cubism bụ Mma Ọzọ
Ọbịbịa mbụ a na-ejedebeghi na afọ a emechawo kpughee ezi ihu. Ihe a na-arụ na Stonehearth bụ ụlọ mmanya na ihe omume RPG na oge nhazi. Ndị na-egwu egwu ga-adịgide ndụ n'ọnọdụ ndị siri ike, na-ewughachi ebe obibi ha ma na-emepe ya. Mgbe ndị mbụ bi na obodo gị, mkpa ha ga-ezute site na ịmepụta usoro mmepụta na nhazi. N'eziokwu, ụwa dị na Stonehearth abụghị enyi na ndị egwuregwu ahụ, ya mere nrụgide na-adịgide adịgide ga-eme ka ndị na-egwu egwuregwu mee mkpebi ngwa ngwa nke nwere ike iduga nkwụpụta a na-atụghị anya ya.
Otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke afọ nwere ike ghara ịbụ egwuregwu simulator. Oge a ebe a abụghị FIFA ma ọ bụ PES, ma ọ bụ egwuregwu nchịkọta basketball nke NBA 2K Playgrounds 2. Ndị na-egwu egwuregwu na-ejide ụdị nke ndị egwuregwu n'egwuregwu basketball n'ezie ma na-ekere òkè n'emepụta egwuregwu ngosi. M na-atụ anya ka ihe dị iche iche na-adọrọ adọrọ, nke na-adọrọ adọrọ n'okpuru mgbanaka na ọkpụkpụ mara mma site na ogologo oge. Ihe omimi nile nke basketball nke oge a gbakotara na kpoonu NBA 2K Playgrounds 2.
Usoro na-atụgharị n'elu - na-emebu egwuregwuplay elements. Omuma abụọ na-enweghị onye nwere mmasị.
Egwuregwu egwu na-adịghị anwụ anwụ Total War na-adị na ebe nrụọrụ weebụ. Ndị na-eji ntụrụndụ eme ihe na-achọsi ike na-elele ụsụụ ndị agha nke ọ bụla maka ike na akụkụ ọhụrụ nke atụmatụ 4X dị mma. Total War Saga: ocheeze nke Britannia na-ejikọta usoro ihe eji eme ihe n'oge ochie na map ụwa na iwu kpọmkwem nke ndị agha nọ n'ọgbọ agha ahụ. Ị ghaghị ichebara akụ na ụba echiche, mepee obodo na ịchọpụta sayensị, ma bụrụ onye isi na-achị isi na ezigbo ihe nlereanya maka ndị dike gị. Mgbagwoju anya na ndi ozo n'ebu agha buru ibu bu ihe di egwu. Ma ọ bụghị, na Total Agha adịghị eme.
Ụdị ndị agha yiri agha ndị Britain yiri egwu ọbụna oké ìgwè ndị agha Rom
Otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke afọ a na nkwado nke multiplayer ga-eju anya egwuregwu na ihe na-adọrọ mmasị obibia na mmejuputa nke gameplay. Na Bio Inc. Mgbapụta ị na-akpọ dịka dọkịta nke na-anwa ịchọta onye ọrịa gị. N'ịntanetị, ị ga-emeso onye ọrịa na onye ọkpụkpọ ọzọ ma kpughee ihe mgbaàmà ọhụrụ nke ọrịa ahụ. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iburu ọrịa ahụ mgbe niile ma gbalịa ime ka onye ahụ na-enweghị obi ụtọ nwụọ. Nhọrọ ahụ bụ nke gị. Ihe oru a bu hardcore, ma n'otu ugbua na-egbu oge!
Naanị ịkwadola egwuregwu a maka ule na ụlọ akwụkwọ ahụike.
Na-emechi ndepụta nke egwuregwu kachasị egwu egwuregwu a n'afọ, ọrụ nke genre Racing. Forza Horizon 4 bụ nnukwu azịza nke ndị ọrụ mmemme 2 ndị meghere elu a. Onye na-agba ọsọ na-emepe emepe na mbara igwe nwere ike imeri obi ndị na-agbapụta ụdị egwuregwu a, nnukwu ebe na ebe ndị mara mma. Egwuregwu Online na-enye gị ịsọ mpi na ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ma mee ka ụzọ gị gaa n'elu ogo. Ụdị agbụrụ dị iche iche na ntụrụndụ dị mma ga-eme ka ịnọ gị nọrọ n'otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke afọ.
Mgbawa ụgbọala nke ụwa
Ọsọ asọmpi egwu ọ bụla na-eme ka onye ọkpụkpọ mee ihe kachasị mma iji nweta ihe ịga nke ọma. Ọhụụ ọ bụla ọ bụla, ọhụụ ọ bụla ọ bụla, egwuregwu ọ bụla ọ bụla bụ ahụmahụ pụrụ iche nke ị na-esiteghị n'ịkụ egwu megide ọgụgụ isi. Egwuregwu ndị a ga-eme ka ị nwee mmetụta dị ukwuu ma bụrụ ndị a ga-abanye n'ime ụwa ndị a mepere emepe ogologo oge.